Izinyunyana zifuna ikhefu lothisha - Ilanga News
Home Izindaba Izinyunyana zifuna ikhefu lothisha
Izinyunyana zifuna ikhefu lothisha
Zithi banelungelo lokuthola isikhathi sokuphumula
ZIFUNGA ziyagomela izinyunyana zothisha, zithi inkomo ingazala umuntu uma zingavuma ukuba othisha bangaphumuli ngamaholidi kaMfumfu (October), ukwenzela ukukhathula umsebenzi olahlekile kungafu-ndwa ngenxa yokubheduka kwe-Coronavirus ngoba othisha kabasebenzi epulazini lapho bezozwa ngomlungu osho into ayitha-ndayo ngepulazi lakhe.
Izinyunyana iSadtu), iNatu, National Professional Teachers’ Organisation of South Africa (Naptosa), iSouth African Teachers Union (SAOU) neProfessional Educators Union (PEU), zithi kazihambisani nalesi sinqumo soMnyango wezeMfundo eyisiSekelo sokuzama ukukhathula umsebenzi olahleke esigabeni sesibili sonyaka.
Zithi lesi sinqumo sithathwe ngaphandle kokuvulemana nazo. Okhulumela uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo, uMnu Ellijah Mhlanga, uthe akukho okuningi azokuphawula ngalolu daba ngoba lusezithebeni.
Silobe izolo ngoLwesithathu ethe kuzobhungwa ngalo khona izolo ebusuku nezinhlaka ezifanele.
Ibamba lingamengameli weNatu, uMnu Sbusiso Malinga, utshele leli phephandaba ukuthi othisha basebenza ngokuzikhandla nsuku zonke, ngakho-ke ngeke bavumele ukuba kunqanyulwe amaholidi abo ngoba banezinhlelo zabo nabo.
Uthe umthetho obekiwe wezisebenzi uthi kufanele uhulumeni ufake isaziso ezinsukwini eziwu-90 ngaphambi kokufinyelela esinqu-mweni esifuze lesi.
“Balale nini bavuka sebazi ukuthi kumele othisha bengayi emaholidini?
“Othisha bakhandlekile, basebenza nangezimpelasonto mihla yonke bengavali ngamaholidi, bavuka ekuseni ngovivi kodwa kabakhokhelwa imali eyengeziwe ngokwenza lokho.
iCovid-19 yalethwa ngothisha nokuthi isikhathi esilahlekile, silahlwe
yibona. Ngamaholidi asemthe-thweni lawa, othisha bayadinga ukuphumula.
“Banengcindezi, kade beshone-lwe yizihlobo zabo ngenxa
yeCovid-19, nabo begula.
“Phela kasisebenzi epulazini lapho esizozwa khona ngomlungu esho into ayithandayo ngepulazi lakhe. Yizifundiswa lezi, kumele kuhlonishwe lokho,” kusho uMnu Malinga.
UNobhala-jikelele weSadtu, uMnu Mugwena Maluleke, uthe othisha nabafundi badinga isikhathi sokuphumula ngoba iCovid-19 ibadalele ingcindezi enkulu.
UNobhala-jikelele wePEU, uMnu Ben Machibi, uthe nakuba kulahle-ke isikhathi esiningi kwezemfundo ngenxa
yeCovid-19, kodwa lokho akuchazi ukuthi kumele kupha-zanyiswe othisha nabafundi.
“Kunothisha abasebenza ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi kuyakhathulwa okulahlekile,” kusho uMnu Machibi.
Previous articleKuhlehlile ukukhishwa kwesigwebo sabasolwa
Next articleUkhuza ukwenziwa ihlazo kokhuvethe